Sideed U Jabtaa Xisaab Koontada 'Instagram'? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sideed u jabsataa koontada 'Instagram'?
April 26, 2021 0 comments 529
Waqtigan xaadirka ah way badan yihiin dad caan ah ama aan caan ku ahayn inay yihiin dhibbanayaal jabsada akoonnada shabakadaha bulshada, Instagram ma aha mid ka baxsan xaaladdan, tani war uma aha midkeenna, maxaa yeelay waxay samayn karaan cabashooyinka dadweynaha si mid kasta oo ka mid ah kuwa raacsan uu u ogaado .
Tani waxay naga dhigeysaa inaan qiimeyno sida ay u jajaban tahay amniga shabakadaha bulshada, Instagram ayaa culeyska saareysa, oo waxaan isweydiineynaa hadii ay suurta gal tahay inaan noqono dhibanayaal dad xaasidnimo leh, oo sababa faa iidooyin awgeed u jabsadan kara akoonkeena. Halkan waxaan ku caddeyn doonnaa dhowr waxyaalood oo arrintan la xiriira.
Helitaanka furaha sirta ah marin u helka koontada, tani waa habka ugu fudud uguna caansan ee lagu jabsado koontada 'Instagram'. Iyadoo loo marayo bogga loogu talagalay ficilkan, waxaa jira kuwo badan, in kastoo dhammaantood aysan run ahayn ama la isku halleyn karo, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad si taxaddar leh ula socoto degelladan.
Iyadoo loo marayo Keylogger:
Kuwani waa barnaamijyo loogu talagalay inay basaasaan dadka midkoodna kombiyuutarkaaga ama taleefankaaga gacantaIyaga ayaga, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato faahfaahin kasta oo dadkan ah, xitaa waxay ku qoraan aaladaha ay isticmaalaan maalin kasta, si ay u shaqeeyaan waa inay ku xirnaadaan aaladaha dhibbanayaasha suurtagalka ah.
Tani waa qalab aad u awood badan loogu talagalay kuwa adeegsada iyo mid aad khatar u ah kuwa dhibanaha u ah haakarisyada.
Sababta waa wax iska cad oo fudud, aaladaha elektaroonigga ah waxaan inta badan ku qornaa furayaasha marin u helka wax kasta, waxa naga khuseeya, emayllada, shabakadaha bulshada, bangiyada iyo xitaa lambarrada dadka ugu dhow qoyskeenna iyo wareegyada bulshada, taas oo u rogi karta iyaga dhibbanayaasha sidoo kale.
Marka laga hadlayo arjigaan, asal ahaan wuxuu la mid yahay kii hore, waxaad marin u leedahay mid kasta oo ka mid ah howlaha aaladaha elektaroonigga ah, ha ahaadaan taleefannada gacanta, kiniiniyada, laptop-yada, marka la soo koobo, wax kasta oo aan maalin walba u isticmaalno.
Kaliya maheli kartid inaad gasho furaha marin helida waxkastoo aan kor kusoo xusnay, waxaad kaloo gali kartaa wicitaankeena iyo liisaska fariimaha qoraalka, adoo og waxa aan qornay iyo cida aan uqornay. U siinta haakarisku marin ficil ahaan wadar ahaan nolosheena iyo tan dadka ku xeeran.
Nambarada gelitaanka waxay ku keydsan yihiin bog furayaasha:
Bog furayaasha loogu adeegsiga badan yahay mid kasta oo ka mid ah qalabka elektaroonigga ah ee adeegsiga maalinlaha ah badanaa xilligan kaas oo aan ku galno lambar sir ah, waxay na weydiin doontaa haddii aan rabno inay keydiso, waxa ugu badan ee lagugula talinayaa waa inaadan waligaa sameyn
Hagaag hadday fiicantahay waa xal aad u wanaagsan Dadkaas sida caadiga ah wax ilaaway, sidoo kale waa seef laba af leh kuwa inta badan ku keydsada furayaashooda sirta ah dhexdooda, daalacashada ayaa ka sahlan in la helo sidaas darteedna way fududahay in la jabsado.
2 Iyadoo loo marayo Keylogger:
3 App-isdhaaf ah:
4 Nambarada gelitaanka waxay ku keydsan yihiin bog furayaasha:
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo khawano Facebook.
Sidee loo ogaadaa cidda aan raacin barta twitter?